सर्वदलीय बैठकमा जाँदैन जापः दियो दह्रो सुझाव – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङसर्वदलीय बैठकमा जाँदैन जापः दियो दह्रो सुझाव
सर्वदलीय बैठकमा जाँदैन जापः दियो दह्रो सुझाव
June 12, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङ, 12 जुन।
जन आन्दोलन पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जाँदैन। जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पत्रकारहरू बोलाएर दलीय अडान स्पष्ट पारेका हुन्। उनले नजानुको कारण पनि स्पष्ट पारेका छन्। मोर्चाको निम्तोमा नै शङ्का गर्दै उनले बोलाउने शैलीबाट नै मोर्चाको नियत थाहा पाउने बताएका छन्।
‘सर्वदलीय बैठक त्यतिखेर बोलाइन्छ, जतिखेर सर्वदलीय सहमतिमा आन्दोलन तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मोर्चाले त कार्यक्रम तय गरेर पनि कार्यरूपमा ल्याइसके, के हामी चिया र बिस्कुट मात्र खानु जानु र?,’ डा. छेत्रीले भने, ‘भाषाको कुरा उठ्ने वित्तिकै यदि सर्वदलीय बैठक बोलाएर मतामत मागिएको भए हामी जाने थियौँ। अब उनीहरूले कार्यक्रम नै दिइसकेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै औचित्य छैन।’
वैठकमा नजानुको कारण उनले मोर्चाको आन्दोलन ‘नक्कली हुनु’ बताएका छन्। सक्कली हो भने जापले दिएको तीनवटा सुझाव मोर्चाले मान्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले दिएको सुझाव छ-1. जीटीए चुनाउ मोर्चाले लड्नु हुँदैन। 2. विधायकहरूलाई राजिनामा गर्न लाउनुपर्छ। 3. विजेपीले राजनैतिक प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ अनि मनसुन सेसनमा गोर्खाल्याण्ड बील संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बील नल्याएमा सांसदलाई राजिनामा गर्न लगाउनुपर्छ।
‘यही नै गोर्खाल्याण्डतिर बढ्ने बाटो हो। यी सबै कुरामा मोर्चा सहमत छ भने मोर्चाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनै पर्दैन, हामी जहाँ भए पनि समर्थकहरू लिएर मुद्दाको समर्थनमा (कुनै पार्टीको होइन) सडकमा उत्रिने छौँ,’ छेत्रीले भने, ‘मोर्चाको कार्यक्रम र सर्वदलीय बैठक अर्को तमासा हो, 86 देखि यो तमासा भइरहेको छ, फेरि अर्को तमासाको दर्शक जापलाई बन्नु छैन।’
भाषाको कुरालाई गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा मोर्चालो गरेको रुपान्तरणलाई उनले असामन्य मानेका छन्।
‘मोर्चाले साँच्चै गोर्खाल्याण्ड मागेको हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पहाडमा कोही पनि अलग राज्यको विरोधमा छैनन्। जन आन्दोलनको प्रथम बुँदामा नै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छ। मोर्चाले साँच्चै गोर्खाल्याण्ड मागेको हो भने जापको सुझाव मानोस्।’
डा. छेत्रीले एक महिनापछि हुने जीटीए चुनाउमा मोर्चाले भाग नलिए जापले पनि नलिने अनि अन्य दलहरूलाई पनि नलिने अवस्था आउँने बताएका छन्।
‘यो मागमा अडिटको भूमिका के छ, अडिट रोक्न मात्र गोर्खाल्याण्ड मागिएको हो?,’ डा. छेत्रीले मोर्चालाई शङ्का गरे, ‘सरकारी कार्यालयमात्र बन्द गर्नुले उद्देश्य त्यही देखिँदैछ।’
उनी अनुसार विगतमा धेरै आन्दोलन भयो। कुनै न कुनै निहुमा ती आन्दोलनहरू फिर्ता लिने काम भयो, कहिले सांसदको, कहिले मुख्यमन्त्रीको, कहिले गृहमन्त्रीको अनुरोधमा। ‘यो त्यस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ?,’ उनले मोर्चालाई प्रश्न गरे।
सासंदले गृहमन्त्रीलाई भेटेको कुरामा पनि उनले सन्देह गरेका छन्। ‘मोर्चाले सांसदको हातबाट गृमन्त्रीलाई दिन लगाएको पत्र सार्वजनिक गरियोस्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ ‘गोर्खाल्याण्ड’ नै भनिएको छ कि ‘दार्जीलिङको समस्या समाधान गर’ भनिएको छ? हिजो सांसद अहलुवालिया र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको सँगै फोटो देखाएर पत्रकारहरूले सांसदले दार्जीलिङको समस्यालाई लिएर भेट्यो भन्दैथ्यो। त्यसको अर्थ त्यहाँ गोर्खाल्याण्डको उल्लेख गरिएको छैन।’
मोर्चासित गोर्खाल्याण्ड पुग्ने एजेण्डा नै नभएको अनि जनतामारा कार्यक्रम गरेर तमासा गरिरहेको जापको बुझाइ रहेको भन्दै उनले भने, ‘गोर्खाल्याण्ड राज्य पाउने बाटो कुन हो? बाबु पनि छोरा पनि त्यही जुलुस प्रदर्शन, बन्द गर्दैछ, यस्तो कार्यक्रमले गोर्खाल्याण्डमा पुगिँदैन भनेर इतिहासले बताइसकेको छ। मोर्चाको रोड म्याप के छ? स्पष्ट पार।’
उनले अहिले मोर्चाले दिल्लीलाई बँचाउने अनि दार्जीलिङलाई नचाउने खेल मात्र गरिरहेको र कार्यनीतिमा इमान्दारिता र विश्वसनियता नदेखिएकोले नै जाप सर्वदलीय बैठकमा नजाने भएको स्पष्ट पारे।
‘यस्तो आन्दोलन गर्दैछ, जो जनतामारा मात्र छ, यस्तो प्रकारले राज्य निर्माण हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी कार्यालय नपुगे सर्विक ब्रेक हुनसक्छ, यस्तो असुविधामा हालेर आन्दोलन हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा पनि सांसद सिनमा छैनन्। उनी त यहाँ हुनुपर्ने। सबैले बुझ्नुपर्छ, मगाएर ल्याएको सांसद संवेदनसील हुँदैनन् र उप्रान्त पहाडकै छोरा पठाउनुपर्छ।’